Ngosipụta ahụ bụ ihe ngosi ịma mma kachasị ukwuu na China, nchịkọta igwe, ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa nlekọta onwe onye, ​​ngwaahịa ndị ọkachamara mara mma, etemeete, Nlekọta Ahụike na ihe ndị ọzọ. The Hengxing igwe nlezianya kwadebere, na ikenyeneke mbiet larịị nke technology, elu-arụmọrụ; usoro ultras ...
Ihe 5 kpatara ịhọrọ nkwakọ ngwaahịa tube dị ka akpa kacha mma
N'oge a, ejirila akpa dị iche iche na ihe ịchọ mma. Na ojiji nke piakota akpa na-eto eto nke ukwuu. Obere ikike na mgbanwe emeela ka ọ bụrụ akpa kacha mma iji gboo mkpa dị iche iche. Enyi na Enyi iji Ihe niile ị ga - eme bụ ịgbanye ihe mkpuchi na squeese, na - agbaso ncha ...
Ultrasonic bụ otu ụdị igwe na-efegharị efegharị, nke a na-agụnye usoro ntanetị na usoro vibration ultrasonic. Ọ bụ ike na-agbanwe agbanwe nke ike dị elu, ike dị elu, nke ikike ịnya ụgbọ na-apụ apụ. Na ihe kwekọrọ na ya dịka ...